Nkọwa na foto nke ụdị nkịtị na ụdị wisteria - Ornamental osisi na-eto eto - 2019
Ụdị wisteria (wisteria) bụ isi, nkọwa na foto
Wisteria ma ọ bụ wisteria - ọ bụ ogologo, dị elu, ịrị elu nke ezinụlọ legume. Ọ na-etolite n'ógbè ndịda, ebe ọ na-adị mma, na-enye ụba dị ukwuu na nkwụsị na-enweghị ebe obibi.
Wisteria nwere nnukwu, pinnate epupụta na mbụ nwere ihu ma emesị bụrụ ezigbo. Osisi osisi ndị ahụ na-acha odo odo, na-achakarị ọcha. Ghọta na ncha na-acha na-agbacha ruo 30 cm n'ogologo.
Wisteria na-agbaji n'oge opupu ihe ubi, na n'oge okpomọkụ na-ejidekwa buds. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama maka iji ya mee ihe.
Wisteria chọrọ ezigbo ọnọdụ. Ọ chọrọ anyanwụ na-egbuke egbuke na ala na-eme nri. Maka ya, ịkwesịrị ịkwado nkwado ndị siri ike, dịka wisteria na-etolite nke ọma na oge ma na-eburu nnukwu mpaghara.
Wisteria-Liana na-agba ọsọ mgbe akwụkwọ ahụ apụtabeghị. Ha na-apụta mgbe osisi ahụ na-acha akwụkwọ ndụ.
Ọ dị mkpa! Ọmarịcha okooko osisi nke wisteria anaghị adabara ọnwụ, n'ihi na ngwa ngwa ha na-agwụ. Ogwu nke okooko osisi nwere ike inwe obi uto ya.
Mkpụrụ nke wisteria bụ pubescent bean pods. Ogologo ha dị ruo 15 cm, n'ime e nwere ọtụtụ mkpụrụ akụkụ dị iche iche.
Ndị dị iche iche nke wisteria, ndị nkịtị na anyị latitudes.
Mara mma wisteria
N'okpuru oke ohia di elu nke di mita 500-1800 karia elu ohia di na etiti anyanwu nke China, Chinese wisteria na-etolite. A na-ahụkwa ya na Japan, wee bịa Europe n'afọ 1816.
Osisi a bụ osisi vine na-egbu osisi nke nwere mita 15-25, ihe ndị dị na isi nwere ihe dịka 25-40 cm ma na-agagharị na-enweghị atụ, ogbugbo bụ isi awọ.
Wisteria Chinese na-agba agba n'April na May. O nwere ike ịmaliteghachi oge na August na Septemba. Umu ahihia ndi ozo na-egosi, nke gunyere uzo di iche iche na-acha odo odo ma o bu okooko osisi chakoo.
Okooko osisi na-agba n'otu oge. Ogologo ha dị 2-5 cm, nwere petals ise. A na-egosi na mkpụrụ osisi dị n'elu alaka ma ọ bụ n'azụ akwụkwọ nke afọ abụọ.
Ụdị ụdị ọ bụla bụ ìhè-achọrọ ma na-achọ ala: ọ na-amasị mmasị miri emi, ájá ájá. Ọ bụ ihe dị iche iche na-eguzogide ntu oyi nke ga-adịgide ndụ na-adịte aka n'oge okpomọkụ ruo -20 degrees. Chinese Wisteria dị ezigbo mma na obodo ndị gbara ya gburugburu, n'ihi ya, a na-ejikarị ya na landscaping.
E nwere ụdị ugbo abụọ:
acha ọcha (alba) - okooko osisi ọcha;
Terry (plena) - okooko osisi.
Chinese Wisteria na-akụ n'ogige ntụrụndụ. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya n'ihi osisi mara mma, bụ nke na-acha edo edo. Enwere ike itolite na ọ bụghị n'ụdị mmiri, ma n'ụdị osisi, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịmechaa ya. Ọ dịkwa mma maka ịba n'ime ite.
Ị ma? Ọ bụ mkpụrụ nwere ike ịmị mkpụrụ akwụkwọ, ma ọ bụghị ibudata àgwà varietal. Ọzọkwa, osisi ndị sitere na mkpuru osisi anaghị aba ụba, okooko oge. Ya mere, ọ ka mma mgba wisteria cuttings na layering.
Ọ bụghị ọ bụla wisteria toro na ubi. Ma n'etiti ubi iche depụtara wisteria blooming. O rute elu nke mita 10, nke dị obere karịa Chinese wisteria.
Akwụkwọ nke okooko wisteria ma ọ bụ floribunda buru ibu (ihe dị ka 40 cm), mgbagwoju anya - ha na-achịkọta ruo 19 epupụta. Osisi ndị ahụ bụ obere, odo odo-acha anụnụ anụnụ. Osisi 2-3 izu mgbe e mesịrị Chinese wisteria. Okooko osisi na-agba nwayọọ nwayọọ.
Wisteria blooming ntu oyi na-eguzogide. Na-eguzo ruo -23 Celsius.
Na usoro nke decorativeness karịrị Chinese wisteria. A na-eji ya na nhazi ala n'ihi ọtụtụ ihe ndị mara mma, okooko mara mma. Akwụsị ụkwụ na-eru 60 cm n'ogologo. Mkpụrụ osisi ahụ dị ebube.
Ụdị ihe mma nke wisteria floriferous:
acha ọcha (alba) - na okooko osisi chacha acha;
pink (rosea) - icha mmirimmiri pink okooko osisi;
acha odo odo terry (violaceo-plena) - okooko osisi terry purple;
(macrobotrys) - brush ruo 1.5 mita n'ogologo, akwụkwọ edemede ruo 10 cm;
variegated (variegata) - nwere variegated epupụta.
Mara mma wisteria sitere na Japan. Liana rute elu nke mita 10, nwere mkpụrụ osisi Ome. Akwụkwọ ndị ahụ dị mgbagwoju anya, 10 cm n'ogologo. Ha bụ mkpụrụedemede pubescent n'akụkụ abụọ.
Osisi ndị ahụ na-acha ọcha. Ghọta na brush nke nwere ogologo 15-20 cm. Amalite ịmalite na May na June. E nwere ụdị mma mara mma na-acha ọcha na-acha odo odo okooko osisi.
Mkpụrụ chara n'onwe ya na November ma nwee oghere 20-centimeter nwere oghere velvet.
Wisteria dị mma maka ịba n'ime ite.
Japanese Wisteria sitere na Japan. Nke a na-acha ọcha okooko osisi, ọ bụghị dị ka eji achọ dị ka ụdị ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa! Chinese Wisteria malitere ịmalite mgbe ọ dị afọ atọ, Japanese wisteria - mgbe ọ dị afọ iri. Nke a bụ maka ndị na-echere.
Ụka a nke wisteria bụ obere ntu oyi na-eguzogide ọgwụ.
Ụmụ amaala North America shrubby wisteria. Nke a, iru mita atọ n'ịdị elu, nwere alaka alaka. Okooko osisi acha odo odo-acha anụnụ anụnụ, ọkara. Akwukwo osisi wisteria shrub ruru 15 cm n'ogologo.
Osisi a magburu onwe ya adịghị adịkarị karịa ụdị ndị ọzọ. Osisi shrub na-eto nwayọọ nwayọọ. Enwere ike itolite na tubs.
Akwukwo Nsogbu bụ ụdị dị nso nke wisteria shrub. Ọ na-esi na North America. Nwee ogologo buds - aka 1.5 mita. A na-etinye osisi ahụ dịka ntu oyi na-eguzogide, ma mgbe ụfọdụ, ọ na-akwụsị.
Ị ma? Wisteria toro na tubs na ọdịda kwesịrị ịbata n'ime ụlọ ebe okpomọkụ adịghị ada n'okpuru 8-10 ogo. Iru mmiri dị 65-75%, ọkụ ga-egbuke egbuke. Ịgbara oyi, osisi ahụ dị obere mkpa. Na March, a na-emechachaachaa okpueze ahụ.
Site n'inwe otu n'ime ụdị ọgwụ ndị a n'ihu ọnụ ụzọ ụlọ ma ọ bụ n'elu tea, ị nwere ike ịnụ ụtọ okooko osisi na ísìsì ha. Ọzọkwa wisteria decorate garden arbors, drape bare walls.
Atụmatụ ndị dị mma banyere otu esi transplant geraniums. Atụmatụ nke usoro n'ụlọ na n'ọhịa
Ihe jikọrọ ya na iris mgbe okooko: usoro iwu nke nlekọta
Mkpụrụ ọka bara ụba n'okpuru nku nkuji griin
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ụdị wisteria (wisteria) bụ isi, nkọwa na foto